February 11, 2020 - Myitter
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မြန်မာစုံတွဲ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တစ်နေ့ကို ၁၀ကားလောက် နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတယ် …
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ…မြန်မာစုံတွဲ…ချောင်းရိုက်တွေ…ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တနေ့ကို…၁၀ကားလောက်..နေ့စဉ် မြင်တွေ့နေရတယ်၊အဲဒီကာယကံရှင် တွေရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်..အဲဒီကားတွေ မြင်တွေ့နေကြရမှာပါ။ တချိန်မှာ…ငါ့အဖေတွေ…ငါ့အမေတွေဆိုပြီး…သူတို့သားသမီးတွေလည်းမြင်နေကြ ရမှာဆိုတော့တွေးကြည့်ရင်….ပြသာနာအကြီးကြီးတွေပါ။မသိနားမလည်တဲ့ ညီမလေးများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ မြင်ရတွေ့ရတာတွေ စိတ်မကောင်းစရာတွေမို့ပါတစ်နေ့တစ်နေ့ ချက်ဘောက်ရီကွက်စ်ထဲမှာ လာအကြံဉာဏ်တောင်းကြတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျအများစုမှာ တူညီတဲ့အကြောင်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ချစ်သူနဲ့ အတူနေ နယ်ကျွံကြတဲ့အခါ မှတ်တမ်းတင်ခံရတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတာပါပဲ။ အချို့ဆို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် […]
ပလပ်စတစ် ပစ္စည်းလေးတွေပေါ်မှ သင်သတိထားသင့်သည့် သင်္ကေတလေးများ၏ အဓိပ္ပါယ် ….
အိမ်ကခွက်တွေဖင်လှန်ကြည့်လိုက်ပါ ပလပ်စတစ်အသုံးအဆောင်တွေကို ရည်ရှည်သုံးမယ်၊ အကြိမ်ကြိမ် ထည့်မယ်၊ သုံးမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားရင် ဖင်ကိုသာ လှန်ကြည့်လိုက်ပါ။ အောက်ခြေတနေရာမှာ အထူးသဖြင့်ဖင်မှာ တြိဂံလေးထဲမှာ 1 ကနေ7အထိဂဏန်းတလုံးနဲ စာ ၂လုံး၊ ၃လုံး ပါတာကို တွေ့ရပါမယ်။ အဓိပ္ပါယ်တွေကတော့ 1 ဆိုရင်… (PET […]
ယခု အချိန်ထိ အမှုမပေါ်သေးပါ ….
ယခုအချိန်ထိအမှုမပေါ်သေးပါ မြဝတီမြို့၊အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ရေပူစမ်းတွင်ဆိုင်ကယ်လုယက်ပြီးဓားဖြင့်ဦးခေါင်အားခုတ်ကာသောင်ရင်းမြစ်ထဲပြစ်ချခဲ့သောလူသတ်မှုအမှုမပေါ်ပေါက်သေးပါ။ မြဝတီမြို့သည်အလွှာပေါင်းစုံမှလာရောက်နေထိုင်သူများနှင့်အဖွဲ့ပေါင်းစုံနေထိုင်ကြသည်မှာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်…. သို့ဖြစ်ပါ၍သေဆုံးသူ ကိုဖြိုး(ခ)ဂွတ်ရှယ်မှာ၈.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပျောက်ဆုံးသွားကြောင်းမိသားစုဝင်များကပြောဆိုတယ် အမှန်တရားလိုလာသူများအနေနဲဂွတ်ရှယ်၏နောက်ဆုံးသွားလာလုပ်ရှာမှုများကိုတွေရှိပါကအမှန်အတိုင်းသတင်းပေးပို့လိုပါတယ်…. တစ်ခါသုံးကဒ်ဖြစ်လည်းသတင်းပို့လို့ရပါတယ်သတင်းပို့သည့်ကိစမပေါက်ကြားစေရပါ။ မြဝတီရဲစခန်းဖုန်းနံပါတ် ၀၅၈၅၀၅၀၄ …ဘီဝမ်း ၀၉၄၅၈၂၄၂၀၄၂ credit zin min tun unicode version ယခုအခြိနျထိအမှုမပျေါသေးပါ မွဝတီမွို့၊အမှတျ(၅)ရပျကှကျ၊ရပေူစမျးတှငျဆိုငျကယျလုယကျပွီးဓားဖွငျ့ဦးခေါငျအားခုတျကာသောငျရငျးမွဈထဲပွဈခခြဲ့သောလူသတျမှုအမှုမပျေါပေါကျသေးပါ။ မွဝတီမွို့သညျအလှာပေါငျးစုံမှလာရောကျနထေိုငျသူမြားနှငျ့အဖှဲ့ပေါငျးစုံနထေိုငျကွသညျမှာအားလုံးသိရှိပွီးဖွဈပါတယျ…. သို့ဖွဈပါ၍သဆေုံးသူ ကိုဖွိုး(ခ)ဂှတျရှယျမှာ၈.၂.၂၀၂ဝရကျနညေ့နပေိုငျးတှငျဆိုငျကယျဖွဈပြောကျဆုံးသှားကွောငျးမိသားစုဝငျမြားကပွောဆိုတယျ အမှနျတရားလိုလာသူမြားအနနေဲဂှတျရှယျ၏နောကျဆုံးသှားလာလုပျရှာမှုမြားကိုတှရှေိပါကအမှနျအတိုငျးသတငျးပေးပို့လိုပါတယျ…. တဈခါသုံးကဒျဖွဈလညျးသတငျးပို့လို့ရပါတယျသတငျးပို့သညျ့ကိစမပေါကျကွားစရေပါ။ မွဝတီရဲစခနျးဖုနျးနံပါတျ […]
ရန်ကုန်_CB_ဘဏ်_ဓါးပြတိုက်သူ မိပြီ …..
ရန်ကုန်_CB_ဘဏ်_ဓါးပြတိုက်သူမိပြီ ရန်ကုန်၌ စီဘီဘဏ်ဝန်ထမ်းများအား သေနတ်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်၍ ဘဏ်မှ ငွေကျပ်သိန်း(၆၀၀)ခန့် လုယူထွက်ပြေးသွားသူအား ဖမ်းဆီး ရမိ နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ အမှတ်(၃၅)ရပ်ကွက်၊ ပင်လုံလမ်း နှင့် အဏ္ဏဝါလမ်းသွယ်ထောင့် အမှတ်(၁၂၁၇)ရှိ စီဘီဘဏ်၌ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့ နံနက် […]
ရှမ်းပြည်နယ်က ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နှီးဘုရားကြီးကို ဖူးမျှော်နိုင်ရန် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် …
ရှမ်းပြည်နယ်က ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နှီးဘုရားကြီးကို ဖူးမျှော်နိုင်ရန် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နှီးဘုရားကြီးသည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ ပန်လင်းဆိုင်ဒေသမှာ တည်ရှိပြီးဉာဏ်တော် အမြင့်ပေ ၄၃ ပေ၊ တင်ပလ္လင်ခွေ အကျယ် ၃၆ ပေ ကျယ် ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒီ နှီးဘုရားကြီးကို မိုင်းဖုန်း […]
ဘုန်းကြီးကျောင်းသစ် ဆောက်လုပ်ရန် မြေသန့်ရှင်းလင်းရာ မှငွေဒင်္ဂါး (၁၂၀)ပြားအား တူးဖော်ရရှိ …
ဘုန်းကြီးကျောင်းသစ် ဆောက်လုပ်ရန် မြေသန့်ရှင်းလင်းရာမှငွေဒင်္ဂါး (၁၂၀)ပြားအား တူးဖော်ရရှိ ၁၁. ၂. ၂၀ ၂၀ ရက်နေ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ တောင်ဒွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်ကုန်းကျေးရွာ၌ နံနက် (၈)နာရီခန့်တွင် သုဓမ္မာသာရ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသစ် ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ရွာသူရွာသားများမှ မြေနေရာသန့်ရှင်ရေးဆောင်ရွက်နေစဉ် အင်ကုန်းကျေးရွာနေ ဦးမင်းစိုးလင်း(ဘ)ဦးထွန်းရွှေ မှ GEORGE V […]
အနောက် ကမ္ဘာသို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြန့်ပွားစေခဲ့သူ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ….
ဘုန်းတော်ကြီး အရှင်အာနန္ဒာမေတ္တေယျ ဟု ကျော်ကြားခဲ့သော သူ၏ အမည်ရင်းမှာ ချားလ် (စ်) ဟင်နရီ အယ်လင်ဘင်းနက် ( Charles Henry Allan Bennett ) ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို ၁၈၇၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်နေ့တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ […]
” ကိုယ့်အိမ်က မီတာ အရမ်းလည်မြန်နေလို့ စိတ်ပူနေလား စမ်းသပ်နည်းရှိတယ် ”….
ဇော်ဂျီ / ယူနီကုဒ် Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ ကိုယ့်​အိမ်​က မီတာ အရမ်းလည်​မြန်​​နေလို့ စိတ်​ပူ​နေလား စမ်းသပ်​နည်းရှိတယ်​။ မီတာခနဲ့ ချိန်​ပြီး သုံးချင်​လား ဒါ​လေးသိမှဖြစ်​မယ်​။ ဥပမာ တစ်​ယူနစ်​ကို (၅၀)ကျပ်​ဆိုရင်​ အဲ့(၅၀)ဖိုးပဲသုံးချင်​တယ်​။ အိမ်​ကမီး​ချောင်း ဘယ်​နှစ်​နာရီ ဖွင့်​ခံမလဲ ဆိုတာမျိုး​ပေါ့။ မီတာမှာ တစ်​ယူနစ်​တက်​​အောင်​ ဒီပစ္စည်း​လေးကို […]
တရားခံထံမှ ‘လက်ဖက်ရည်ဖိုး’ ငွေတစ်သိန်းခွဲတောင်းသည့် ဒုရဲအုပ် ထောင်လေးနှစ်ကျ
ကျပ်သိန်းရာချီ လာဘ်ယူသူများကိုလည်း ထောင်ဒဏ်သုံး၊ လေးနှစ်ပင်ချသည့်အတွက် ၎င်းအမှုသည်၏ အပြစ်ဒဏ်က များသည်ဟု ဒုရဲအုပ်ကျော်နိုင်ဦး၏ရှေ့နေက ပြောသည်။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု စွပ်စွဲချက်များဖြင့် တရားရင်ဆိုင်နေရသည့် ရဲအရာအရှိတစ်ဦးအား ထောင်ဒဏ်လေးနှစ်ကျခံရန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်က ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် အမိန့်ချလိုက်သည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် အမှတ်(၃) နယ်မြေ ရဲစခန်းမှ […]